စင်ကာပူမင်ဘာများ စုစည်းကာ လေကန်ရန် - MYSTERY ZILLION
စင်ကာပူမင်ဘာများ စုစည်းကာ လေကန်ရန်
ရန်ကုန်မင်ဘာများ ၂၆-၂၇ တွင် တွေ့ဆုံပွဲလုပ်မည်ဟုဆိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် စင်ကာပူမင်ဘာများလည်း ဇန်နဝါရီလက ပြုလုပ်သကဲ့သို့ လူစုကာဆွေးနွေးပွဲလုပ်ရန် အကြံပြုမိပါသည်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကိုစေတန်လည်း ၂၂ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းရောက်ရှိမည် ဖြစ်သောကြောင့် ၂၂ ရက်နောက်ပိုင်း လာနိုင်မည့်ရက်ကို အကြံပြုပေးပါရန်။ စနေ၊တနင်္ဂနွေဆိုပါက ၂၆-၂၇ စက်တင်ဘာနှင့် ၃-၄ အောက်တိုဘာ များရှိပါသည်။ နေရာအနေဖြင့် ယခင်ပြုလုပ်သော Vivo City နှင့် East Coast နှစ်နေရာကို ယာယီလျာထားပါသည်။ အခြားသောနေ့ရက်နှင့် နေရာတို့ကိုလည်း အကြံပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လာရောက်မည့်လူများ နေ့ရက်နှင့် နေရာကို အကြံပြုသွားကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
နာ ့က စလုံးက မဟုတ်တော ့ခက်တယ်..အဟီး :p:p
၂၂ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း weekend တွင်အားပါသည်။
ဒီတစ်ခါတော့ လဘက်ရည် အီကြာကွေးလောက်နှင့် (ကိုယ်မစားရပါဘူး အပီကြိတ်သွားတဲ့ လူကိုမှတ်မိတယ်)
မဖြစ်ဘူးထင်သည်။ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် အက်ဒမင် စေတန် ဒကာခံသော ဘီယာလေးဘာလေးနှင့်မှ အဆင်ပြေမည်။
လူစာရင်း စတင်ထည့်ပါမည်။ ထပ်မံစာရင်းပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ ဒီဘီသာသာ နှစ်ဦးသာ ဖြစ်ပါက ချိန်ရန်မလိုပဲ ညနေထွက်ခဲ့ လက်ဘက်ရည်သောက်မယ်ဟု ပြော၍ချိန်းရမည်ထင်သည်။ :d အီကြာကွေး ဟုတ်မဟုတ်ကိစ္စကတော့ ထုံးစံအတိုင်းလူစုံမှ ညှိလျင်အဆင်ပြေမည် :d
လေကန်လို့ကောင်းမယ့်နေရာ ထပ်စဉ်းစားရမယ်ဗျ။ ဗွီဗို အပေါ်ထပ်က သွားရလာတာ အဆင်ပြေတာပဲရှိတယ် လေကြာကြာကန်လို့ မကောင်းဘူး။ စနေနေ့လိုနေ့မျိုးမှာ အလုပ်ဆင်းရတဲ့လူ မရှိရင် စနေမှာ တွေ့ကြတာပေါ့။ စနေအလုပ်ဆင်းရမယ့်လူရှိရင်လဲ တခါထဲ အသိပေးပါဦး။
အချိန် နှင့် နေရာ အတည်ပြုပြီးပါက ကျွန်တော်လည်း ပါ၀င်ပါမည်။
Quoted . xD
ဟုတ်ကဲ့ ဒါဆိုရင်တော့ နေ့ရက်နဲ့ အချိန်ကိုအကြမ်းသတ်မှတ်လိုက်ပါ့မယ် မဆင်မပြေတဲ့လူများ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်နဲ့တစ်ရက်တည်းဖြစ်အောင်လို့ ၂၆ လို့အကြမ်းသတ်မှတ်လိုက်ပါ့မယ်။ အချိန်ကတော့ စနေနေ့တစ်ပိုင်းသမားများ ရှိပါက အဆင်ပြေစေရန် ၁ နာရီနောက်ပိုင်းလို့ အကြမ်း သတ်မှတ်ထားပါ့မယ်။ နေရာလေးတော့ အကြံပေးကြစေချင်ပါတယ် ကျွန်တော်က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ဘယ်နေရာဘာရှိမှန်း မသိလို့ပါ။ လာမယ့်မင်ဘာများ Thread မှာ Reply ပြန်ထားခဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုးရင် စာရင်းကို Update ပြန်လုပ်ပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ။ နေ့ရက်နှင့်အချိန်ကို ပြုပြင်လိုပါကလည်း အကြံပြုသွားနိုင်ပါသည်။
နေ့ရက်။ ။ ၂၆-၀၉-၂၀၀၉
အချိန်။ ။ မွန်းလွဲ ၁ နာရီနောက်ပိုင်းမှ ပြန်ချိန်အထိ
နေရာ။ ။ East Coast
(၁၂) မ aindarayshin
နေရာ။ ။ (ညှိနှိုင်းဆဲ)
စက်တင်ဘာ ၂၂ သည် အီကွေတာပေါ်သို့ နေဖြတ်ချိန် (မြောက်ကမ္ဘာခြမ်းမှ တောင်ကမ္ဘာခြမ်းသို့ နွေရာသီ ရွှေ့ပြောင်းရာ လမ်းကြောင်း၏ အလယ်တည့်တည့်) ဖြစ်သည်။
Indoor တနေရာရာကို အကြံပေးလိုသည်။
လုပ်ကြဗျာ.. ကျနော်တော့ နောင်နှစ်မှပဲ လာတော့မယ်..
နောင်နှစ် ရှိရင်တော့ လာနိုင်မယ်မထင်
လာမှာပေါ့ ဒီလူတွေနဲ.လေကန်ချင်သေးသကိုး:39: Mz မှာမရေးဖြစ်တော့ပေမဲ. အစဉ်အမြဲဖတ်ဖြစ်နေတယ် အကြမ်းအားဖြစ်တော့ စနေတနင်းဂနွေ အားပါတယ်
မင်မင်မော်မော်တွေ အကုန်လုံး စလုံးရောက်ကုန်တော့ သားတို ့မန်ဘာလေးတွေ ဘန်းကျော်မှာအားငယ်လိုက်တာ :2::2::2:
ရန်ကုန်ကမလား။ 26 ရက်နေ့လာခဲဲ့လေ။ ဘန်းကျော်က အမ်ဇက် လူအင်အားသိပါလိမ့့်မယ်ဗျား
ဟုတ်ပါ့ အဲဒီမှာမှ လူကအများကြီး ပျော်စရာကြီးနေမှာ။ ဒီကလူက သိပ်တောင်မရှိပါဘူး။ အရင်တစ်ခါလည်း ဒီလိုပဲ လေးငါးဆယ်ရောက်ရှိတာ လက်ဘက်ရည်နဲ့ အီကြာကွေး အဲလေ ကိုယ်ကလည်း စားတာပဲသွားသွားသတိရနေတယ် :d ကဲကဲ လာမည့်သူများလည်း ဆက်လက် စာရင်းပေးကြပါ ပြောသာပြောရတယ် သိတဲ့လူက ကုန်သလောက် ဖြစ်နေပြီ :d လူအသစ်များစာရင်း ပေးကြပါလို့ ပြောင်းပြီး အော်ရမယ်။
ဒီတစ်ခါ အီကြာကွေး မဟုတ်တော့ပဲ Pizza Hut ဝယ်ကျွေးရင်ကောင်းမလား ... (စိတ်ဝင်စားတာကတော့ ရန်ကုန်ကတွေ့ဆုံပွဲမှာ ကျွေးမယ့် လဘက်သုတ်)
ကဲ အရင်တစ်ပါတ်ကလာတဲ့ လူဟောင်းတွေ ပြန်လာကြပါဦး .. စေတန်က အကျီင်္ လက်ဆောင်ပေးမယ်တဲ့
နေရာစဉ်းစားဦးဗျ တစ်ယောက်ကတော့ အင်ဒိုးတစ်ခုခုလို့ အကြံပေးသွားတယ် ဘယ်နေရာကောင်းမလဲ တစ်ချက်စဉ်းစားပါဦး ကျွန်တော့်အကြောင်းကတော့ သိတယ်နော် ဘယ်နားဘာရှိမှန်း သိပ်မသိဘူးနော်။ စကားမစပ် အင်္ကျီဆိုမှ ကိုဒီဘီနဲ့ တော်မယ့် ဆိုက်က ပါလာပါ့မလား :d
လာမယ်သူတစ်ယောက်တော့ ရှိဦးမယ်ဗျ.. ကျနော် သွားဖို့ဖြောင်းဖြနေတယ်.. . ခုထိတော့ ဘာမှမပြောသေးဘူး :d
ကိုဒီဘီအတွက် အကျိီင်္က xxxxxxxxxxxl ဟုတ်ဘူးလား ?? :d
စကားမစပ် အင်္ကျီဆိုမှ ကိုဒီဘီနဲ့ တော်မယ့် ဆိုက်က ပါလာပါ့မလား :d
вЂњဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် အတွက်ပါ ထည့်ပြီး စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်...:dвЂќ
ဟမ်.... တဖြေးဖြေးနဲ့ ပီဇာအတွက် စိတ်မချ ရတက်မအေး ဖြစ်လာပြီ :d ခန္တာကိုယ် ဆိုက်တွေကတော့ လူပျိုကြီးရဲ့ အစားအသောက် ပြိုင်ဘက် ရန်သူဆိုက်တွေပဲ :d မတော်လည်း စိတ်မပျက်ကြပါနဲ့ အခုတောင် မိန်းကလေးတွေ ချက်ပေါ်လေးတွေဝတ်နေတာပဲဟာ ကိုဒီးမွန်နဲ့ ကိုဒီဘီလည်း ဗိုက်မဖုံးရင်တောင် အပေါ်ပိုင်းတော့ အင်္ကျီကတော်မှာပါ ဟိဟိ
вЂњအခုတောင် ကိုလူပျိုကြီး ပြောသလိုဖြစ်နေပြီ... ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် T-Shirt ၀တ်ရင် MRT ပေါ်မှာ ကောင်မလေး တွေက မျက်တောင် မခက်ပဲ ကြည့်နေကြလို့... вЂќ
ဆင်တိုဆာ ရေလည်ကျွန်းလေးမှာ ဆုံရင်ကောင်းမလား။ ရက်ကိုတော့ ၂၆ သတ်မှတ်လိုက်ဗျာ။
ကျွန်တော်လည်း ကိုလူပျိုကြီး PM ရထဲကလာဖို့ စိတ်ကူးရှိပါတယ် ခင်ဗျား။ အကိုတို့ရဲ့ Final decision ကိုစောင့်နေတာပါ။ တော်ကြာလာလာပြောပြီး ရောက်မလာ ခဲ့ရင် အားနာလို့ပါ။
ခုထိကတော့ 70% သေချာပါတယ် ခင်ဗျား။ PM ကိုဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်အောင်ပိုလိုက်တဲ့ ကိုလူပျိုကြီး ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :6:
လာပါ လာပါ ဂျွန်မလား အကြောင်းတွေ မေးစရာရှိတယ် ...
မသိတဲ့လူတွေကျနေတာပဲ ၂၇ ဆိုရင် ခွင့်ပြုမိန့်တင်ရဦးမယ်မဟုတ်လား အဲဒီမှာ ရေကူးလို့ရလားဟင် ရေကူးဘောင်းဘီယူခဲ့ရမယ်ဆိုရင် ကြိုပြောနော်။
ကိုဇက်ကိုလည်း မျှော်နေတာပါ အခုတော့စာရင်းထဲထည့်ထားတယ် ၇၀% ဆိုတော့ နာမည်ကိုရေးတဲ့နေရာမှာ အလုံးနေလျော့မလို့စဉ်းစားသေးတယ် ၇၅% ဆိုရင် Zac လို့ရေးလို့ရတယ် ၇၀% ဆိုတော့ ဘယ်လိုရေးရမှန်း မသိတော့ဘူး
ဘာပဲပြောပြော တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ အင်အားတောင့်လာပါပြီ အရင်လူတွေအကုန်လောက်တော့ ဆက်သွယ်ပြီးပါပြီ။
စက်တင်ဘာ ၂၂ သည် အီကွေတာပေါ် တည့်တည့် နေရောက်ချိန်ဖြစ်သည်။
၂၆ သည် ၂၂ နှင့် သိပ်မခြား။ ပူပါသည်။
Law Shay wrote: »
ဟုတ်တယ်ကဒီဘီ အဲဒါစောစောက ပြောဖို့မေ့သွားတယ် အင်ဒိုးလို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။ အင်ဒိုးအကြံပြုတဲ့ ကိုလောရှည်လည်း တစ်နေရာလောက် အကြံပြုပေးပါဦး။ ကျန်လူများလည်း အကြံပြုကြပါဦး နေရာတစ်ခုပဲ အတည်သတ်မှတ်ရန် ကျန်ပါတော့တယ်။
နေရာ။ ။ Sentosa (OR) အဆင်ပြေတဲ့ နေရာ
ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ Ok နေဆဲပါပဲ။ လာပါမယ်။
အင်းကောင်းသားပဲ ကိုလူပျိုရေ တစ်ညီတစ်ညွတ်ထဲ ဖြစ်အောင် အားလုံးရေကူးသွားကြတာပေါ့ ( ကိုဒီဘီ ရှေ့ဆုံးမှ ဦးဆောင်ကူးမည်ဆိုလျှင် )
မောင်ပြုံး မလာနိုင်ရင်တော့ မိန်းကလေး ပရိတ်သတ်တွေ နည်းမှာ သေချာတယ်။ :39::39:
ကိုဒီဘီရေ ဦးဖိုးနိုင်ဝင်း ကိုလည်း ရအောင် ခေါ်ခဲ့ဗျာ။ ပရိတ်သတ်ကြီးက တောင်းဆိုနေပါတယ် ခင်ဗျား :6::67:
ဟော်တယ်မှာ အခန်းငှားရင်ကောင်းမလား ...
အင်ဒိုးဆိုရင်တော့ မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူးဗျ။ ပိုက်ပိုက်မကုန်တဲ့ အင်ဒိုးသိရင် ပြောကြပါဦး။ အပူဒါဏ်တော့ ခံနိုင်မယ် ထင်တာပဲဗျ .. ရေမကူးနဲ့ဗျာ ရေမဆော့နဲ့ နေပူထဲ လျှောက်မသွားဘူးဗျာ .. အရိပ်အောက်မှာ ငြိမ်ငြိမ်လေး လေထိုင်ကန်မယ်ဗျာ .. မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟင်။
ကိုဒီဘီရေ ဦးဖိုးနိုင်ဝင်း ကိုလည်း ရအောင် ခေါ်ခဲ့ဗျာ။ ပရိတ်သတ်ကြီးက တောင်းဆိုနေပါတယ် ခင်ဗျား
ရက်နဲ့ နေရာ သေချာသွားရင် ဖိတ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ် ခင်ဗျ ..
အရင်တစ်ခေါက်လာကတည်းက မ QueenW တစ်ယောက်တည်းပါ သူကတော့ များပြီ :39:
ခုတစ်ယောက်ကိုတော့ သွားဖို့ပြောထားတယ်.. ဒါပေမဲ့ သူက အ၀င်လည်း နည်းတယ်.. ပြီးတော့ တခြားသူတွေနဲ့လည်း သိပ်မသိတော့ မလာချင်ဘူးပြောနေတယ်..
မရရအောင်တော့ ပြောပြီး.. ကျနော်ဖို့ပါ စားခိုင်းမှပါ.. ဖြစ်သေးပါဘူး :P
လာမယ့်သူတွေက ဆရာတွေချည်းပါပဲလား။ အငယ်တွေတစ်ယောက်မှမပါပါ့လား။ စလုံးက မင်ဘာအသစ်တွေ မရှိဘူးထင်တယ်နော်။
ကျွန်တော်လည်း အသစ်ပါ ခင်ဗျ...
လာခဲ့တစ်ယောက် မိပြီ သူလည်းစင်ကျားပူးမှာပဲ လာခဲ့ပါဦး ကိုသားစိုး အကြီးအငယ်မရှိပါဘူးဗျ ပြောသာပြောတယ် လူကြီးတစ်ယောက်မှ မပါပါဘူးဗျာ အကုန်လူငယ်တွေပါပဲ ဟိဟိ ကိုဒီဘီနှင့် ကိုဖိုးနိုင်ဝင်းမပါ။ :d
ဒါနဲ့ ကိုလူပျိုကြီးရေ မသိလို့မေးမယ်ဗျာ။ ဘယ်အကြောင်းအရာကို ဦးတည်လေကန်မှာလဲ လေဖြစ်ရင် ပြီးရောကန်ကြမှာလား။ ဒါမှမဟုတ် ဆန်တိုဆာ မှနေ့ခင်းကြောင်တောင် နေပူဆာလှုံနေတတ်တဲ့ ဟို ကဏန်းလေးတွေအကြောင်းလား\_:D/\_:D/\_:D/။
ကိုကြီးလောရှည် စင်ကာပူမှာ စနေတနင်္ဂနွေ အင်ဒိုးဆိုရင်လူတွေက များမှများ ဒီကြားထဲ ကျွန်တော်တို့ လူအများကြီးနဲ့ ဆို အဆင်ပြေပါ့မလား။
ကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့ sembawang beach လိုနေရာမျိုးကို စိတ်၀င်စားတယ် အရိပ်လဲ ရှိတယ် လူလဲ သိပ်မများဘူး(ကျွန်တော်ရောက်ဖူးတုန်းကအခြေအနေနော်။) လေကန်လို့ကောင်းမယ်ထင်တယ် ဒါပေမယ့် သွားရလာတာတော့ နဲနဲ ကသိလင်တနိုင်တယ်။ အစားအသောက်အတွက်ဆိုလဲ နဲနဲ အလုပ်ရှုပ်မယ်ထင်တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ မော်ကြီး မင်ကြီးများ ဆန္ဒပါ။ အချိန်နဲ့ နေရာ confirm ဖြစ်ပြီး အဆင်ပြေတယ် လာနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ လာခဲ့မယ်။
How about Marina Bay (near that little Merlion strucked down by lightening shortly) Star Bucks ? Native Myanmar Forum Meetings are usually there.
Or in NUS ? Our faculty has some lounge. But there will be no food after 1 PM in Saturday.
Or Esplanade ? There are some places to sit and chat.
အဟဲ ကိုလူပျိုကြီး စကားကို ထောက်ခံပါ၏။ ကိုသားဆိုး လာခဲ့ပါ။
တားတားလည်း ဏယူးလေးပါဂျာ..။ တားကိုလည်း စရင်းထဲထည့်ပေးပါဦး..။ ဒါနဲ့စကားမစပ် ကို Divinity အားလုံးတူတူတွေ့ကြတာနော် ဘီဘီတစ်ယောက်ထဲ သွားကစ်နေလို့ကတော့ တိမယ်..ဟွန်း..လူဇိုးကြီး. ):))
Maria Bay ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်..
အခုလို ကျွန်တော်တို့ အငယ်များကို မပစ်ပယ်ပဲ နွေးထွေးစွာ ခေါ်တဲ့အတွက် ကိုZack and ကိုလူပျိုကြီးတို့ကို ကျေးဇူးပါ။ ကျွန်တော်လာဖြစ်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါ့မယ်။
ကျွန်တော်တို့ အငယ်လို့တော့ မပြောနဲ့လေ.. ကျနော်ကျန်သေးတယ်.. :d
ကိုမောင်ပြုံးက ကျွန်တော်ထက် အသက်သာငယ်တာ ပညာက ကျွန်တော်တို့ထက် သာပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့အငယ်ဆိုတာ MZ ရဲ့ junior အနေနဲ့ဆိုလိုချင်တာပါဗျာ။
ကိုမောင်ပြုံးရဲ့ အသက်နဲ့ ပညာကတော့ နောင်လာနောင်သားတွေအတွက် အတုယူသင့်တဲ့ အထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကမဟုတ်တောင် ကိုစေတန်တို့ နောက်နားကပ်လျှက်မှာရှိပါတယ်ဗျာ။
gtalk က friendlist ထဲမှာ မိန်းကလေးအများဆုံးလူသားကို mz မှာရှိတယ်လို့ပြောလာရင် တခြားမကြည့်နဲ့ အဲဒါ တာရာပွကြီးကာတွန်းထဲက အသားညိုညို နဖူးပြောင်ပြောင် မျက်လုံးပြူးပြူး နှုတ်ခမ်းထော်ထော်နဲ့ မောင်ပြုံးဆိုတဲ့ကလေး moderator ပဲလို့သာမှတ်ပေရော့ပဲ :P
သူက အလုပ်ကလည်းခပ်ရှုပ်ရှုပ်ဆိုတော့ တနေကုန် computer ကိုင်ရတယ်လေ အဲဒီတော့ တစ်ကိုယ်လုံးညောင်းလို့ဆိုပြီး ကိုစိုင်းကျော်စွာဝေကိုအဖော်ခေါ်ပြီး ပေါင်တစ်ချောင်း ၂၅ကျပ်နဲ့နှိပ်တဲ့နေရာမှာ သွားသွားပြီး တစ်ယောက်ကို ၇၅ ကျပ်ဖိုးအနှိပ်ခံနေကျ :P
ကျွန်တော့ယောက္ခမလောင်းကြီး ကိုပီဇီ (ခေါ်) ကိုဥပစ်ခါ ကတော့အဲဒါမျိုးတွေမလုပ်ဖို့ ဆုံးမရှာပါတယ် :P
ကိုအင်ဖို.. တော်ပီ.. ခင်ဗျား စာအုပ်တွေ ပြန်ပေးတော့ဘူး :P
နောက်တွေ့ရင်လည်း ကာကာတိုက်တော့ဘူး.. စိတ်ဆိုးတယ်..
လူတွေက မှန်တာပြောရင် သိပ်မခံချင်ကြဘူးဗျ.. ဟက် ဟက် .. ဟီး. ကျနော်လည်း ပါနေတယ်ထင်တယ်..
တော်မှ.. တော့ပစ်ချော်ကုန်ပြီ.. ဆက်ပြောကြပါ..
နေရာကို သေသေချာချာသေး သတ်မှတ် ဆွေးနွေးကြပါဦး.. ကျနော့်အမြင်တော့ Marina Bay က ကောင်းမယ်ထင်တယ်..
East Coast မှာ အပင်ရိပ်တွေ ရှိတယ်တဲ့ အဲဒီမှာ လုပ်ပါလားဟု တစ်ဦးတည်းသော မိန်းခလေး မင်ဘာမှ အကြံပေး ...
စလုံးရဲ့ အစိုးမရတဲ့ မိုးကို အားလုံးပဲ သိကြမှာပါ။ ဒါကြောင့် မိုးရွာခဲ့ရင် ဆိုတာလေး ကိုထည့်ပြီး စဉ်းစား စေလိုပါတယ်။
ဟုတ်ပါ့ဗျာ ဒီရက်ပိုင်းမိုးက ရွာချင်သလိုရွာနေတယ်။ နောက်ပြီးတော့ လူအခြေအနေကြည့်နေတာပါ လူလည်းသိပ်မများပါဘူး။ အရင်လုပ်တဲ့နေရာပဲ ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ East Coast ရယ် Sentosa ရယ်က မိုးရွာရင် မကောင်းဘူးထင်တယ်။ Starbucks ဆိုရင်တော့ Pizza ကျွေးမယ့်လူလွတ်မယ် နောက်ပြီးဆိုင်မှာ လူအုပ်လိုက်နဲ့ အကြာကြီးထိုင်လို့ မဖြစ်ဘူးထင်တယ် ပြီးတော့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် နေကြမယ့်လူတွေလည်းမဟုတ်။ မထူးတော့ပါဘူး ဒါနဲ့နေရာက ငြိမ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး အရင်လုပ်တဲ့နေရာပဲ ကောင်းပါတယ် အရင်လိုပဲဝိုင်းထိုင်လို့ရမယ် ထိုင်ချင်သလောက်ထိုင် အားမနာရတော့ဘူး မိုးရွာရင်အထဲဝင်လို့လည်း လွယ်ပါတယ် စားစရာလည်းလွယ်တယ်။ အရင်အတိုင်း Vivo City အပေါ်ထပ်လို့ပဲ သတ်မှတ်လိုက်တော့မယ်ဗျာ။
နေပူတယ် နေပူတယ်။ အဲဒါနဲ့စာရင် အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေ သစ်ပင်ရိပ်ကမှ တော်ဦးမယ်။ မိုးရွာရင် ကော်ဖီဆိုင်တွေကို ပြေးလို့ရတယ်။
Star Bucks က အကြာကြီးထိုင်လို့ ရပါတယ်ဗျာ။
ဟုတ်ပါပြီ ပြဿနာမရှိပါဘူး လေဒီတွေ ဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့ East Coast သွားပါ။ ကျွန်တော်က East Coast မရောက်ဖူးတော့ ဘာရှိမှန်းမသိဘူး။ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ပြီးတာပါပဲ။ East Coast ကိုအတည်ပဲသတ်မှတ်လိုက်ပြီဗျာ။ ရှေ့မှာလဲ လူစာရင်းနဲ့ နေရာကိုပြန်ပြင်လိုက်ဦးမယ်။
ကျွန်တော်မှာ တခြားလုပ်စရာ တစ်ခုရှိနေပါသဖြင့် ဒီ thread နဲ့ပတ်သက်ပြီး latest information ကို သိပါရစေ ခင်ဗျာ။ :5: